တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူမရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူမရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ …
“ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် ၀င်ရောက် လာတဲ့သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။”
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နစကနဲ့ လ၀က နှစ်ဖွဲ့ စလုံးက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေနဲ့ ဇွန်လတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ သုံးနှစ်အတွင်း တိုးလာတာ (၄၇, ၀၀၀) ကျော်လောက် တိုးလာတာ တွေ့ရကြောင်း၊ အဲဒီအထဲမှာ ခိုးဝင်လာတာ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရကြောင်း။ သို့သော် ဒါအမှန် လို့ ပြောလို့ မရကြောင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှောင်တိမ်းနေသူတော့ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးချင်သေးတယ်ဆိုရင် မကျေနပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အချိန် မရွေး ထပ်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ
This entry was posted on February 25, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မျိုးဗီဇ DNA တရားဝင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ မကြာမီဖွဲ့မည်	ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ခရစ်ယျာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊ →